राप्रपालाई देशले खोजेको बलियो राष्ट्रवादी पार्टी बनाउन सकिन्छ: युवा नेता प्रकाश रिमाल - Rastriya Samachar
मङ्गलवार, २७ फागुन २०७६ २३:५६
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्थापनाकालदेखि नै सक्रिय, नेपाल शिक्षक परिषदको सस्थापक सदस्य, राप्रपा युवा संगठन काठमाडौंको अध्यक्ष हुँदै केन्द्रिय सदस्य, महासचिव हुँदै हाल राप्रपा युवा संगठनको केन्द्रिय अध्यक्ष तथा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रिमाल स्थायी शिक्षण पेशा छोडी २०५४ मा काठमाडौं सितापाइलाको निर्वाचित वडा अध्यक्ष समेत हुनुभएको थियो । २०७० को संविधान सभा र २०७४ को निर्वाचनमा समेत उम्मेदवार भै सम्मानजनक मत प्राप्त गर्नु भएको राप्रपाको लोकप्रिय नेता हुनुहुन्छ । पार्टी भित्र संरचना सुधार, सक्रिय सदस्यताबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि, पदाधिकारी निर्वाचनको बिषय उठाएर लागू गराउन सशक्त भुमिका निर्वाह गर्ने पार्टीको उदयमान युवा नेता रिमालसँग पार्टी एकीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय समाचारद्वारा गरिएको कुराकानी ।
१)राप्रपा र राप्रपा संयुक्तबीचको एकीकरण कसरी सम्बभ भयो?
राप्रपा र राप्रपा संयुक्तको नेताहरुको पृष्ठभुमि एउटै हो । २०६२/०६३ सम्म सैद्धान्तिक धरातल पनि एउटै थियो । २०६२/०६३ पछि पशुपतिशमशेर जबरा, डा प्रकाश चन्द्र लोहनीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन राप्रपाले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता स्विकार गरि संविधान निर्माणमा त्यो पक्षमा उभिए भने कमल थापाले नेतृत्व गरेको तत्कालीन राप्रपा नेपालले राजसंस्था, हिन्दुराज्य, अधिकार सम्पन्न स्थानिय तहको पक्षमा आफुलाई उभ्याए । २०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनमा कमजोर उपस्थिति भए पनि २०७० को निर्वाचनमा कमजोर संगठन हुँदा समेत चौथो शक्तिको रुपमा स्थापित भयो ।तत्कालीन राप्रपा नेपालको एजेन्डामा जनमत देखिएपछी गणतन्त्र ,धर्मनिरपेक्षता, संघीयताको पक्षमा उभिएको तत्कालीन राप्रपाका नेताहरुले समेत आफुलाई परिमार्जित गरि आफ्नो पृष्ठभुमि, कार्यकर्ताको भावना अनुरुप राप्रपा नेपालको एजेन्डामा उभिन पुगे जुन नेताहरुको दुरदर्शिता मान्नुपर्छ । साथै देशले खोजेको वैकल्पिक एजेन्डा सहितको शक्ति निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा राप्रपा नेपाल र राप्रपा नेताहरुको सुझ्बुझ, बिबेक पुर्ण निर्णयले राजसंस्था, हिन्दुराज्य, अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह पक्षधर पार्टी एक हुने निर्णय र तत्कालीन राप्रपा नेपालको विचार र नेतृत्व समेत कमल थापालाई स्वीकार गरि महाधिवेशन सम्पन्न गरे पछि सत्ता सहभागिता, पार्टी भित्रको आन्तरिक व्यस्थापनमा कमिकमजोरी, नेताहरुको इगो, घमण्ड, पदलोलुपताले पार्टी विभाजन भयो । राष्ट्रिय राजनितीमा उदयमान शक्तिको रुपमा देखा परिसकेको राप्रपा २०७४ मा पुन: कमजोर बन्यो ।
बिगत जे भएपनी अहिले दुवै पार्टीको एजेन्डा एउटै, नेताहरुको पृष्ठभुमि एउटै भएको हुँदा गत उपनिर्बाचनको परिणाम को पाठ सिक्दै,राष्ट्रिय पार्टी हुन नसकेको पीडा सम्झदै, योग्यता, क्षमता, इमानदारीता भएपनि राष्ट्रिय राजनितिमा कुनै भुमिका नपाएपछी कार्यकर्ताको दबाब, शुभेच्छुकहरु चहाना र ढिलो भएपनी नेताहरुमा आएको सुझ्बुझले पार्टी पुनः एक हुन सम्बभ भयो । साथै १३/१४ बर्षमा देखिएको भ्रष्टाचार, बेथिति, कुशासनले देशले वैकल्पिक विचार सहितको राजनतिक शक्ति खोजेको वर्तमान अवस्थामा पार्टीको एकीकरण हुन पुगेको छ।जसले देश भित्र र बाहिर रहेका आम धर्म मान्ने, राजा मान्ने, देश टुक्रिनु हुन्न भन्ने जनता र पार्टीको साथिहरुको मनोबल उच्च भएको छ ।अहिले एकीकरण अति जरुरी र अति आवश्यक थियो र छ पनि ।
२)धेरै पटक बिभाजनको पिडा भोगेको पार्टी फेरि बिभाजन हुदैन भन्ने छ र?
असफलताले पाठ सिकाउछ, सफलता मिल्छ भने जस्तै बिभाजनको पीडाले नेता कार्यकर्ताले पाठ सिकेका छौं । इमानदार, योग्य, क्षमताबान साथै जनमत र निर्वाचनलाई सदैव आत्मसात र बिश्वास गर्ने दल र नेता आफू एक नहुँदा राष्ट्रिय राजनितीमा भुमिका बिहिन हुनुपर्दाको पीडा नेताहरुले राम्रोसँग मनन गर्नु भएको छ । साथै कार्यकर्ताहरु पनि अब नेताको पछि होइन विचार, पार्टीको पछि लाग्नु पर्छ नत्र पार्टी, विचार र आफ्नो भविश्यसमेत अन्धकार हुँदोरहेछ भन्ने बिगतको बिभाजनबाट सिकेका छन । पार्टी बिभाजन नभएको भए राप्रपा राष्ट्रिय पार्टी बन्थ्यो, हुन्थ्यो । दुबै पार्टीको एकीकरणले जनमतको आधारमा अब राष्ट्रिय पार्टी भएको छ । पटक पटक बिभाजन हुने मिल्ने अभ्यासले पार्टी बिभाजन हुनुको कारण पार्टीको संरचना पनि हो भन्ने महसुस समेत भएको छ । अब पार्टी कार्यकर्तामुखी बनाउन पर्छ । नेताले नेता बनाउने संरचनाले नेता नेताकै पछि लाग्ने हुँदा अब कार्यकर्ताबाट पदाधिकारी निर्वाचन भयो भने निर्बाचित नेता कार्यकर्ता मुखी हुन्छ । पार्टी बलियो हुन कार्यकर्ताले नेता खोज्ने होइन, नेताले कार्यकर्ता खोज्ने कार्यकर्ताले जनताकोमा पुग्ने संरचना आवश्यक छ । अहिले पार्टीले सकृय सदस्य बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने निर्णय गरेको र पदाधिकारी निर्बाचन गर्ने ब्यबस्थाले पार्टी बलियो हुने र बिभाजन पनि रोकिने हुन्छ । नेतामुखी संरचनालाई कार्यकर्ता मुखी बनाउनु अति जरुरी छ । अबको बहस छलफल बिभाजन हुनुको कारण खोजी गरी सुधार गर्न आवश्यक छ ।
३)राप्रपा अब राष्ट्रिय पार्टी भयो भन्नुभयो कसरी?
गत २०७४ को निर्बाचनमा राप्रपा, राप्रपा संयुक्त र राप्रपा राष्ट्रबादिको मत जोडदा ३% भन्दा बढी हुन्छ । उक्त निर्वाचनमा कांग्रेससग चुनावी तालमेलले सबै क्षेत्रमा उम्मेदवार नहुँदा समेत राप्रपाको मत कम भएको हो । अहिले सबै राप्रपा एक भएको हुँदा प्राविधिक रूपमा राप्रपा राष्ट्रिय पार्टी हुन असमर्थ भए पनि जनमतको आधारमा अब राप्रपा राष्ट्रिय पार्टी हुन पुगेको छ भन्दा फरक पर्दैन । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वेसर्वा हुने हुँदा राप्रपाले प्राप्त गरेको मत जनमत भएको हुँदा अब राप्रपा राष्ट्रिय पार्टी हो । राज्यको हरेक तहले राप्रपालाई राष्ट्रिय पार्टीकै रूपमा लिनु पर्छ । हिजो मिल्न नसक्दा ३% प्राप्त गरेको आधारमा पाउने समानुपातिक सभासद गुमेको पीडा त नेताकार्यकर्ताले महसुस गरेकै छन् । संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरु, सदस्यहरु गरि तीन वटै तहमा उपस्थित रहेको राप्रपा एकीकरणपछि प्राप्त मत जनमतको आधारमा राष्ट्रिय पार्टी हो । राज्य र कुनै निकायले नकार्न मिल्दैन र नकार्न हुदैन पनि ।
४)केन्द्रीय सम्पादन समिती, पदाधिकारी, केन्द्रिय सदस्य, सचिवालय सबै तीन नेताले बनाउने कुरा छ, कसरी कार्यकर्ता मुखी पार्टी बन्छ?
पार्टी एकीकरण हुँदा सबै तहमा नेतृत्वको सहमतिले नै तय हुने हो । हामीले उठान गर्न खोजेको बिषय अब हुने महाधिवेसनबाट चयन हुने नेताहरु कार्यकर्ताबाट भन्न खोजेको हो ।पार्टी बन्न नसकेको नेतृत्वले होइन, नेतृत्व त हामीले बेला बेलामा अलग अलग बनाएकै छौं नि, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सुर्य बहादुर थापा, कमल थापा, पशुपतिशमशेर जबरा, डा. प्रकाश लोहनी सबै हेरेका छौं । किन पार्टी बनेन भन्दा नेता बलियो हुने, नेता हुन नेताको पछि लाग्नु पर्ने संरचना छ । त्यसैले अब नेतामुखी पार्टीलाई कार्यकर्ता मुखी बनाउनु पर्छ । नेता कार्यकर्ताकोमा जाने कार्याकर्ता जनताकोमा जाने संरचना आवश्यक छ। हामिले पार्टीमा उठान गरेको बिषय यहि हो । जसले गर्दा सक्रिय सदस्यबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने प्राबधान लागू भएको छ । पदाधिकारी निर्वाचनको बिषयले प्रबेश पाएको छ । अब एकीकृत पार्टी पनि यहि दिशामा जानू जरुरी छ ।चुनाव लड्ने पार्टी कार्यकर्ता बलियो हुने गरि संरचना छ । नेताको भागबण्डाले पदाधिकारी बनाउने त्यो पदाधिकारी नेताको पछि लाग्ने हुँदा पटक पटक पार्टी बिभाजन हुन पुगेको छ । कार्यकर्ताले बनाएको पदाधिकारी कार्यकर्ता प्रती उत्तरदायी हुन्छ । नेताले बनाएको नेताप्रती उत्तरदायी हुन्छ्न । तसर्थ नेता कार्यकर्ता प्रती कार्यकर्ता जनता प्रती उत्तरदायी हुने संरचना राप्रपाको आवश्यकता हो । त्यो दिशामा पार्टीलाई लानु हरेक नेता कार्यकर्ताको दायित्व हो।
५) किन पछिल्लो निर्वाचनमा राप्रपाले हार वेहोर्नु पर्‍यो ? के राप्रपालाई जनताले नपत्यएको हो?
यो संविधान गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयताको हो । कांग्रेस-कम्युनिष्टले आफ्नो घोषणा पत्रमा उक्त कुरा उल्लेख गरेर मत मागेर दुईतिहाई प्राप्त गरेर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता स्थापित गरेको हो । तत्कालीन राप्रपा नेपालले राजसंस्था, हिन्दुराज्य ,अधिकार सम्पन स्थानिय तहको पक्षमा मत माग्यो र संविधान निर्माण गर्ने क्रममा फरक मत राख्यो । यो संविधानको संविधान संसोधन, वैचारिक स्वतन्त्रता, विचारको आधारमा दल माथी प्रतिबन्ध नलाग्ने व्यवस्था, आबधिक निर्वाचनको व्यस्थालाई स्वीकार गरि यहि संविधान मार्फत आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्ने रणनीति अंगिकार गर्यो । तसर्थ अहिले राप्रपा यो संविधान बमोजिमको स्थानीय सरकारमा समेत छ भने प्रदेश, संघीय सम्सदमा समेत उपस्थित छ । यो संविधानलाई उपयोग गरि यहि संविधान बमोजिम यो संविधानको गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता फेर्न सकिन्छ भन्ने बिश्वास राप्रपा गर्दछ । स्थानीय तहमा जान मिल्ने, सांसद हुन मिल्ने सरकारमा जान नमिल्ने होइन तर विगतमा सरकारमा सहभागिताको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्दा सरकारमा सहभागिताले राप्रपालाई घाटा भएकै हो । सबै सरकारमा सहभागिता जनाउनु गल्ती थियो भनेर पार्टीले निर्णय गरेर स्विकार गरिसकेको हुँदा अब त्यो गल्ती दोहोरिने सम्भावना छैन ।
६)राप्रपा अब आगामी दिनमा सरकार जादैन भन्न खोज्नु भएको हो?
पटक पटक गल्ती गर्ने छुट राप्रपालाई छैन । यो संविधानको ०६२/०६३ को महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिएको गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता बेठिक भन्ने विकल्पको विचार राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र, सुदृढ अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको अवधारणा अघि सार्ने पार्टीले औचित्य पुष्टि गर्न नसकी सरकारको ‘स’ पनि उच्चारण गर्नु हुदैन । विगतले त्यो पाठ सिकाएको छ । राप्रपाको अबको कार्यनीती, कार्ययोजना सडक र सदन मात्र हुनुपर्छ ।नेताहरुले मुद्दा स्थापित नभए सम्म सरकारको सपना नदेख्दा राम्रो हुन्छ । अब गल्ती गरेमा मुद्दा, पार्टी, कार्यकर्ता शुभेच्छुक सबैको भविस्य सकिन्छ । मुद्दासँग जोडिएर मुद्दा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने गरि सरकार सहभागिताको औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने गरि सरकारको उपयोग गर्ने गरि मात्र सरकार सहभागिता बारे सोच्नु पर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।
७)राप्रपामा किन नयाँ पुस्ता देखिदैन ? पुराना अनुहार मात्र देखिन्छ । के तपाईहरु जस्ता युवा नेतृत्वमा देख्न पाइदैन?
राप्रपा पुराना नेताहरुको मात्र पार्टी भनेर बुझ्नु गल्ती हुन्छ किनकी अधिकाशं नयाँ अनुहार पनि क्रियाशील छन । राजेन्द्र लिङ्देल, डा.धवल शम्शेर राणा लगायत हामी जस्ता धेरै छ्न । अर्को नेतृत्व आजको भोलि स्थापित हुने होइन । योग्यता, क्षमता कृयाशिलताले नेतृत्व स्थापित हुन्छ । पुरानो नेताहरुको राम्रो र सकारात्मक पक्ष लिदैँ एजेन्डा केन्द्रित नेतृत्व स्थापित गर्दै अब नयाँ पुस्ताको युवाको पार्टी बनाउन हामी कृयाशिल छौँ । आगामी दिनले त्यो प्रमाणित गर्दछ । पन्चायत नेताहरुले स्थापित गरेको पार्टी भए पनि पन्चायतको अनुहार नदेखेको, पन्चायतमा कुनै भुमिका नभएको धेरै हामी जस्ता युवाहरु यो पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छौं । अब राप्रपालाई पुरानो नेताको पार्टी भन्नू राप्रपालाई नबुझ्नु नचिन्नु हो भन्ने लाग्छ ।
८) अरु केही भन्नू छ कि?
पार्टी एकीकरण भएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । अब विगतको कुनै पुर्वाग्रह नराखी, योग्यता क्षमता, क्रियाशिलताको आधारमा जिम्मेवारी दिएर युवा पुस्तालाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । हिजोको नेता र नामको आधारमा मात्र नभई आजको क्रियाशिलताको आधार मुल्यांकन गर्नु पर्छ । पार्टी संरचना प्रजातान्त्रिक र कार्यकर्तामुखी बनाउनु पर्छ । यो गर्न सकियो भने अहिले देशले खोजेको बलियो राष्ट्रवादी पार्टी निर्माण गर्न सकिन्छ । यसको लागि सबैलाई शुभकामना दिन चहान्छु । धन्यवाद ।